नियम आफैमा तानाशाह कुरा हो तर नियम नभए अराजकता फैलिन्छ : कोशिस ओझा - MeroReport
नियम आफैमा तानाशाह कुरा हो तर नियम नभए अराजकता फैलिन्छ : कोशिस ओझा
पढ्न, लेख्न र घुम्न मनपराउने थुम्की-८, कास्कीका कोशिस ओझा यति बेला स्नातक तह तेस्रो वर्षको परिक्षाफलको प्रतिक्षामा छन् । रुचिहरु समय, बाध्यता र बुझाईमा भर पर्ने बताउने कोशिसको रुचि भने समाजसेवा गर्ने रहेको छ । रुचिका बिषयलाई बिस्तारै ब्लगमा समेट्दै जाने कोशिसमा रहेका उनै कोशिस ओझालाई मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
कोशिस ओझालाई सोसल मिडियामा के भनेर चिन्ने ? बताइदिनुस न ।
एउटा सामान्य धरातलबाट उठेर न्याय र सकारात्मक पक्ष लिन खोज्ने सामान्य नेपाली ।
केही महिना मात्र भयो । व्यवस्थापनको विद्यार्थी खासै साहित्य नआउने तर मनका कुरा लेख्न अनि हरेक बिषयमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने माध्यम खोज्दै जाँदा फेसबुक,ट्विटर हुदैं ब्लग चलाउन थालेको हुँ ।
मेरो दृष्टिकोण बिचार, सृजना सबै जनाले पढुन् भन्ने आशयले ब्लगिङ गर्छु । समसामयिक राजनिती, साहित्य सृजना आदि मेरो रोजाइमा पर्छन् ।
तपाईले http://ojhakoshis.blogspot.com/ बाहेक अरु पनि चलाउनु हुन्छ ? अनि ब्लगिङ गर्न कत्तिको सजिलो छ त ?
यो एउटा मात्र हो । सजिलो गाह्रो कुरा आफुमा भर पर्ने कुरा हो । एउटालाई सजिलो लागेको अर्कोलाई असजिलो लाग्न सक्छ । ब्लग राम्रो बनाउन म अझै सिक्दै छु ।
शायद म नयाँ भएर वा थोरै लेखेको कारणले होला ब्लग मा खासै प्रतिक्रिया आएको छैन यद्यपि फेसबुक,ट्वीटरमा धेरै माया,सद्भाव र सल्लाह पाएको छु ।
नयाँ नै भएकोले होला अहिले नै खासै त्यस्तो केही प्रसंग छैन ।
आफ्ना कुरा ब्यक्त गर्न अहिले युवाहरुले ब्लगिङप्रति आर्कषित भई रहेका छन, नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ, सदुपयोग या दुरुपयोग ? अनि कस्तो देख्नु हुन्छ ब्लगिङको भविष्य ?
भविष्य प्रयोगकर्तामा भर पर्ने कुरा हो । यो भन्दा राम्रो अर्को विकल्प भए प्रयोगकर्ता त्यस तर्फ जान सक्छन् । भविष्य आँकलन गर्न म सक्दिन यद्यपि सामाजिक संजालको भविष्य उज्ज्वल छ। दुनियाँ नजिक भन्दा नजिक हुन चाहिरहेको छ । यो युग सामाजिक संजाल को युग पनि हो । यो मानिसहरुको दैनिक बन्न पुगेको छ । हरेक कुराका राम्रा नराम्रा पक्षहरू हुन्छन् । हामीले राम्रा कुराहरू मात्र अनुशरण गर्नुपर्छ ।अरुको तुलनामा ब्लगको धेरै सदुपयोग देख्छु ।
नियम आफैमा तानाशाह कुरा हो तर नियम नभए अराजकता फैलिन्छ । त्यसकारण केही आचारसंहिता भएको राम्रो हो । तर सृजनाको कुनै सिमा हुदैन भन्ने यथार्थ भुल्नु हुदैन ।
ब्लगरले चाहिँ खासै नराम्रो गरेजस्तो लाग्दैन । केही अपवाद जहाँ पनि हुन्छन् । सामाजिक संजाललाई मुलधार र मोसफल दुबै मिडियाले पनि आफू अनुकूल प्रयोग गरेका छन् । बिपरित बिचार राख्नेलाई वेबास्ता गर्छन् । यहाँ राम्रो हैन हाम्रोलाई प्राथमिकता दिईन्छ जस्तो लाग्छ तर सबै त्यस्ता छैनन् ।
सबैभन्दा पहिला नागरिक पत्रकारिता भनेको के हो ? बुझ्न जरुरी छ । कर्णालीको किसानको कथा यस भित्र पर्छ कि पर्दैन रु यसको ब्लगमा पहुँच छ कि छैन रु बुझ्न जरुरी छ। केही शहरिया र बिदेशमा बस्ने सिमीत नेपालीको पहुँचमा मात्र हुनाले यो नागरिक पत्रकारिता हो जस्तो लाग्दैन ।यद्यपि केही हदसम्म जनध्वनि चाहिँ आएको छ ।
Comment by Prakash Lamichhane on January 30, 2015 at 11:57am
Congratulations Kosis... :))